သဘာဝအတိုင်း ရှည်လျားကော့ညွတ်တဲ့ မျက်တောင်ထူထူလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့
1 May 2018 . 6:12 PM
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကို ဖော်ကြူးနိုင်တဲ့ မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အရေးအပါဆုံးဆို မျက်လုံးလေးတွေပဲဖြစ်မှာပါနော်။ ဒါဆို အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့မျက်ဝန်းလေးက ညို့ဓါတ်အပြည့်နဲ့လှပနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ မျက်လုံးကို အဓိက ပြောင်းလဲစေပြီး ပိုလှပစေတာက ထူထဲကော့ညွတ်တဲ့မျက်တောင်လေးတွေဆိုတာလည်း ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ Eyelash Extension ဆိုတဲ့ မျက်တောင်အရှည်လေးတွေစိုက်တဲ့ Surgery တွေကလည်း ပျိုမေတွေကြား ခေတ်စားလာတာမို့ မခွဲစိတ်မပြုပြင်ဘဲရော သဘာဝအတိုင်းလေး ရှည်လျားထူထဲတဲ့မျက်တောင်လေးတွေရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေ ရှာနေပြီဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့သာ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။
(၁) လိမ္မော်၊ သံပုရာခွံ
လိမ္မော် (သို့) သံပုရာခွံကို စားပွဲတင်တစ်စွန်းစာခန့် ချေပြီးထည့်ပါ။ သံလွင်ဆီ (သို့) မုန်ညင်းဆီနဲ့မြုပ်တဲ့ထိ ရောမွှေပြီး တစ်ပတ်ခန့်ထားပါ။ အဲ့အနှစ်ကို သန့်စင်ထားတဲ့ Mascara အသန့်အဟောင်းနဲ့ မျက်တောင်ပေါ်လိမ်းပေးပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ။ မနက်အိပ်ရာနိုးရင် မျက်တောင်ကို ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ပြန်ဆေးပါ။ တစ်လခန့် ကြာရင် သိသာတဲ့ရလဒ် ရလာပါလိမ့်မယ်။
(၂) သံလွင်ဆီ နဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်
သံလွင်ဆီတို့ ရှားစောင်းလက်ပတ်တို့ဟာလည်း မျက်တောင်ထူထပ်ကော့ညွတ်စေမယ့် အားဖြည့်အဆီတစ်မျိုးပါ။ သူတို့ထဲမှ လွယ်ကူရာတစ်မျိုးကို သန့်စင်ထားတဲ့ Mascaraအသန့်နဲ့ ညအိပ်ခါနီးတိုင်း မျက်တောင်လေးတွေပေါ် လိမ်းပေးရုံပြီး မနက်နိုးရင် ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးပေးရုံနဲ့ ထူထပ်တဲ့မျက်တောင်တွေ ရလာမှာပါ။
အိမ်မှာ အလွယ်တကူစားနေတဲ့ ကြက်ဥကလည်း မျက်တောင်လေးတွေ ထူထပ်ကော့ညွတ်ဖို့ ဆေးတစ်လက်ပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ဖောက်ထည့်ပြီး Glycerine အလှဆီစားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် အနှစ်ထူပျစ်ပျစ်ရတဲ့အထိ မွှေပါ။ အဲ့အနှစ်ထဲ ဝါဂွမ်းအစိုလေးကိုနှစ်ပြီး မျက်တောင်အရင်းမှ အဖျားထိ ငြင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပြီး ရေအေးလေးနဲ့ ဆေးပေးပါ။ ဒီနည်းလေးကို တစ်ပတ် ၃ ကြိမ်ခန့်လုပ်ရင် လအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ သိသိသာသာ မျက်တောင်လေးတွေ ထူလာမှာပါ။
အုန်းနို့ထဲမှာ ပါတဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေကလည်း မျက်တောင်တွေရှည်လျားစေဖို့ အထောက်အကူပြုတာကြောင့် အုန်းနို့အရဘ်ကိုလည်း ဝါဂွမ်းလေးနဲ့ တို့ပြီး မျက်လုံးအရင်းမှ အဖျားထိ ပွတ်တိုက်ပေးခြင်းကို တစ်ရက် ၂ ကြိမ်ခန့်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်ခွံတစ်ဝိုက်ကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဟာလည်း မျက်တောင်ရှည်လျားဖို့ကို အထောက်အကူပြုတာမို့ မျက်တောင်ထူထူလေးတွေလိုချင်ရင်တော့ မကြာခန နှိပ်နယ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မနှိပ်နယ်ခင် လက်ကိုသန့်စင်အောင်ဆေးပြီး အဆီတစ်မျိုးမျိုး၊ Petroleum Jelly (သို့) Shea Butter လေးလိမ်းပြီး လက်ထိပ်လေးနဲ့ မျက်ခွံတစ်ဝိုက်ကို စက်ဝိုင်းပုံစံ နှိပ်နယ်ပေးရုံပါပဲ။ တစ်နေ့ကို ၅ မိနစ်မှ ၇ မိနစ်ထိ ၂ကြိမ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးရုံနဲ့ မျက်တောင်လေးတွေ အားဖြည့်ပေးပြီး ရှည်လျားလာစေမှာပါ။
ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့သာ လုပ်သွားရင် မျက်တောင်လေးတွေ ကော့ညွှတ်ပြီး သဘာဝအတိုင်း ရှည်လျားလှပနေစေမှာ အမှန်ပါနော်။
သဘာဝအတိုငျး ရှညျလြားကော့ညှတျတဲ့ မကျြတောငျထူထူလေးတှေ ပိုငျဆိုငျဖို့
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အလှကို ဖျောကွူးနိုငျတဲ့ မကျြနှာအစိတျအပိုငျးတှထေဲမှာ အရေးအပါဆုံးဆို မကျြလုံးလေးတှပေဲဖွဈမှာပါနျော။ ဒါဆို အကွညျ့တဈခကျြနဲ့တငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိနိုငျဖို့ ကိုယျ့ရဲ့မကျြဝနျးလေးက ညို့ဓါတျအပွညျ့နဲ့လှပနဖေို့လိုတာပေါ့နျော။ မကျြလုံးကို အဓိက ပွောငျးလဲစပွေီး ပိုလှပစတောက ထူထဲကော့ညှတျတဲ့မကျြတောငျလေးတှဆေိုတာလညျး ငွငျးလို့မရပါဘူး။ ခုခတျေမှာ Eyelash Extension ဆိုတဲ့ မကျြတောငျအရှညျလေးတှစေိုကျတဲ့ Surgery တှကေလညျး ပြိုမတှေကွေား ခတျေစားလာတာမို့ မခှဲစိတျမပွုပွငျဘဲရော သဘာဝအတိုငျးလေး ရှညျလြားထူထဲတဲ့မကျြတောငျလေးတှရေနိုငျမယျ့နညျးလမျးလေးတှေ ရှာနပွေီဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးလေးတှနေဲ့သာ လှယျလှယျကူကူလုပျကွညျ့လိုကျပါဦးနျော။
(၁) လိမ်မျော၊ သံပုရာခှံ
လိမ်မျော (သို့) သံပုရာခှံကို စားပှဲတငျတဈစှနျးစာခနျ့ ခပြွေီးထညျ့ပါ။ သံလှငျဆီ (သို့) မုနျညငျးဆီနဲ့မွုပျတဲ့ထိ ရောမှပွေီး တဈပတျခနျ့ထားပါ။ အဲ့အနှဈကို သနျ့စငျထားတဲ့ Mascara အသနျ့အဟောငျးနဲ့ မကျြတောငျပျေါလိမျးပေးပွီးမှ အိပျယာဝငျပါ။ မနကျအိပျရာနိုးရငျ မကျြတောငျကို ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ ပွနျဆေးပါ။ တဈလခနျ့ ကွာရငျ သိသာတဲ့ရလဒျ ရလာပါလိမျ့မယျ။
(၂) သံလှငျဆီ နဲ့ ရှားစောငျးလကျပတျ
သံလှငျဆီတို့ ရှားစောငျးလကျပတျတို့ဟာလညျး မကျြတောငျထူထပျကော့ညှတျစမေယျ့ အားဖွညျ့အဆီတဈမြိုးပါ။ သူတို့ထဲမှ လှယျကူရာတဈမြိုးကို သနျ့စငျထားတဲ့ Mascaraအသနျ့နဲ့ ညအိပျခါနီးတိုငျး မကျြတောငျလေးတှပေျေါ လိမျးပေးရုံပွီး မနကျနိုးရငျ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးပေးရုံနဲ့ ထူထပျတဲ့မကျြတောငျတှေ ရလာမှာပါ။
အိမျမှာ အလှယျတကူစားနတေဲ့ ကွကျဥကလညျး မကျြတောငျလေးတှေ ထူထပျကော့ညှတျဖို့ ဆေးတဈလကျပါ။ ကွကျဥတဈလုံးကို ဖောကျထညျ့ပွီး Glycerine အလှဆီစားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျးခနျ့ထညျ့ပါ။ ပွီးရငျ အနှဈထူပဈြပဈြရတဲ့အထိ မှပေါ။ အဲ့အနှဈထဲ ဝါဂှမျးအစိုလေးကိုနှဈပွီး မကျြတောငျအရငျးမှ အဖြားထိ ငွငျသာစှာ ပှတျပေးပါ။ ပွီးနောကျ ၁၅ မိနဈခနျ့ထားပွီး ရအေေးလေးနဲ့ ဆေးပေးပါ။ ဒီနညျးလေးကို တဈပတျ ၃ ကွိမျခနျ့လုပျရငျ လအနညျးငယျကွာတဲ့အခါ သိသိသာသာ မကျြတောငျလေးတှေ ထူလာမှာပါ။
အုနျးနို့ထဲမှာ ပါတဲ့ ဗီတာမငျဓါတျတှကေလညျး မကျြတောငျတှရှေညျလြားစဖေို့ အထောကျအကူပွုတာကွောငျ့ အုနျးနို့အရဘျကိုလညျး ဝါဂှမျးလေးနဲ့ တို့ပွီး မကျြလုံးအရငျးမှ အဖြားထိ ပှတျတိုကျပေးခွငျးကို တဈရကျ ၂ ကွိမျခနျ့လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
မကျြခှံတဈဝိုကျကို နှိပျနယျပေးခွငျးဟာလညျး မကျြတောငျရှညျလြားဖို့ကို အထောကျအကူပွုတာမို့ မကျြတောငျထူထူလေးတှလေိုခငျြရငျတော့ မကွာခန နှိပျနယျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မနှိပျနယျခငျ လကျကိုသနျ့စငျအောငျဆေးပွီး အဆီတဈမြိုးမြိုး၊ Petroleum Jelly (သို့) Shea Butter လေးလိမျးပွီး လကျထိပျလေးနဲ့ မကျြခှံတဈဝိုကျကို စကျဝိုငျးပုံစံ နှိပျနယျပေးရုံပါပဲ။ တဈနကေို့ ၅ မိနဈမှ ၇ မိနဈထိ ၂ကွိမျခနျ့ နှိပျနယျပေးရုံနဲ့ မကျြတောငျလေးတှေ အားဖွညျ့ပေးပွီး ရှညျလြားလာစမှောပါ။
ဒီလိုလှယျလှယျကူကူနညျးလမျးလေးတှနေဲ့သာ လုပျသှားရငျ မကျြတောငျလေးတှေ ကော့ညှတျပွီး သဘာဝအတိုငျး ရှညျလြားလှပနစေမှော အမှနျပါနျော။
by Moethae Say . 42 mins ago